बेञ्चमा ढुंगा राखेर पढ्छन् विद्यार्थी | Educationpati.com
बेञ्चमा ढुंगा राखेर पढ्छन् विद्यार्थी
२०७३ माघ २० गते ०९:५६मा प्रकाशित
अछाम । राज्यकोषवाट धेरै बजेट खर्च हुनेमा शिक्षा क्षेत्र अग्रपंक्तिमा छ । गुणस्तरीय र सबैको पहुंचयोग्य शिक्षाको लागि सरकारले वर्षेनी करोडौं रकम खर्चिने गरेको छ । तर ग्रामिण बस्तीका कतिपय विद्यालयको अवस्था भने अझैं दयनीय पाइन्छ ।
जिल्लामा शिक्षा कार्यालय मार्फत निर्माण हुने भौतिक संरचनामा राजनीतिक भागवण्डा हुनु, पहँुच भएकाहरुले दोहोर्याई तेहेर्याई भवन तथा अन्य योजना लिनु जस्ता कारणले दूर दराजका बस्तीहरुमा रहेका विद्यालय जीर्ण संरचनामै सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
जिल्लाको विकट र सदरमुकामबाट निकै टाढा रहेको सोकट गाविस–३ मा रहेको विद्यामन्दिर प्राथमिक विद्यालयको कथा अझ चाखलाग्दो र दुःखद छ । २०५१ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा न त गुणस्तरीय भवन छ न त विद्यार्थी बस्ने फर्निचर । पुरानो र जिर्ण भवन भित्र कक्षा ५ सम्म पढाई हुन्छ । फर्निचर अभावका कारण विद्यार्थीहरु भूँईमा बसेर पढ्न बाध्य छन ।
कोही विद्यार्थी पुराना (जीर्ण) बनेका डेस्क बेञ्चमा ढुंगाहरु मिलाएर बस्ने तथा किताब राख्ने गर्दछन । विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधारका लागि कहींकतैबाट सहयोग हुन सकेको छैन । गाविसमा श्रोत नहुने र जिल्ला तथा माथिल्लो निकायमा पहुच चाहीने हुदा केही गर्न नसकिएको विव्यस अध्यक्ष करन साउद बताउँछन ।
अध्यक्ष साउदले भने “आर पी, विनिहरु के रिपोर्ट गर्छन खै ! जनताले त जसोतसो अहिलेसम्म गरेकै छन जिल्लाको बिलकुल ध्याँन जान सकेको छैन ।” हाम्रो जस्तो विकट र दूरदराजमा कसैको ध्यान जाँदैन साउदले आक्रोस पोखे “के मंगलसेन र साँफेबगर वरिपरि मात्रै अछाम हो ? नभए किन यस्तो ठाँउमा सरोकारवालाको ध्यान जाँदैन ?”
२५० विद्यार्थीलाई २ जना शिक्षक
अनिवार्य तथा गुणस्तरीय शिक्षाको बहस चर्किरहेको बेला ग्रामिण क्षेत्रका विद्यालय वास्तविक अवस्था उक्त विद्यालयले झल्काएको छ । कतिपय ठाँउमा बालमैत्री वातावरण सहित नमूनाको रुपमा कक्षा सञ्चालन भइरहेको भएपनि यो विद्यालय आधारभूत कुराहरुवाट समेत वञ्चित छ । विद्यालयमा एकजना स्थायी शिक्षकको दरवन्दी छ भने एकजना राहत कोटामा शिक्षण गर्छन । २ जना शिक्षकले २ सय ५० जना विद्यार्थी पढाउँनुपर्ने अवस्था छ । विद्यालयको कमजोर अवस्थाका कारण अहिले विद्यार्थी संख्या घट्दै गैरहेको प्रअ रामदेव भाट बताउँछन् ।
विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरवन्दी नहुँदा बालबालिकाको भविष्य समेत अन्योलमा छ । दरवन्दी थप गर्नेतर्फ पनि शिक्षा कार्यालयलगायत अन्य निकायले कुनै चासो नदिएको स्थानयी दान बहादुर साउद बताउँछन । उनले भने “शिक्षक दरवन्दी, फर्निचर, घेरापर्खाल, खानेपानी, शौचालय जस्ता विद्यार्थीका लागि आधारभूत सुविधा समेत नहुनु आफैमा दुःखद कुरा हो ।” यसतर्फ जिशिका र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संस्थाले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
जिल्लामा बिभिन्न एनजिओहरुले दोहोर्याई तेहेर्याईकन सीमित विद्यालय र गाविसहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि विकटमा कसैको ध्यान नजाँदा सयौं बालवालिकाको भविष्य अन्योलमा छ । सुगममा २५ विद्यार्थी भएपनि ४ पाँच जना शिक्षक दरवन्दीहुने तर विकटमा एक सय विद्यार्थी एक शिक्षकले सम्हाल्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नकालागि जिम्मेवार पक्षको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन ।